Au p'tit Chalet nge SPA, ukubaleka yothando!
Cruet, Auvergne-Rhône-Alpes, France
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguDanielle & Patrick
I-Chalet yethu encinci yindawo yokuphumla kunye ne-charm kwi-20 m2 kunye ne-mezzanine ye-10 m2. Yonke into yenzelwe intuthuzelo yakho kwindawo cocooning isithethe entabeni. Ukuphumla kwakho kunye nokuba sempilweni, ungonwabela i-SPA yethu ngeejethi ezingama-60 ezifakwe phambi kwepanorama ebalaseleyo. Le chalet, ifikeleleka ngokulula kunye nendawo yokupaka, yakhiwe kwindawo eluhlaza enombono omangalisayo weentaba. ICruet (alt 350 m) yilali ekwiCombe de Savoie.
Ibhedi ephindwe kabini ibekwe kwi-mezzanine ofikelela kuyo ngokubulela kwileli ye-miller (jonga iifoto) ukuphakama kwe-2 m kodwa ehlala kulula kakhulu ukufikelela kuyo.
4.96 · Izimvo eziyi-69
Emazantsi eendawo ezahlukeneyo zokuchithela iski, ilali yethu yaseCruet ikwingingqi yeCombe de Savoie kwaye yeyeBauges Natural Park. kulungile ukuhlala, ngamaxesha onke, kule ndawo yoxolo, ingqongwe ziintaba. Unokuziqhelanisa nokunyuka intaba, ukubaleka umkhondo, ukukhwela ibhayisekile ezintabeni, ukukhwela ibhayisekile ezindleleni, intenetya ukuba uzisa izihlangu zakho zekhephu, kwaye ngokuqinisekileyo i-alpine kunye ne-Nordic skiing, izikhululo zokuqala ezingaphantsi kwemizuzu engama-40 kude.
Umbuki zindwendwe ngu- Danielle & Patrick
Ngokuqhelekileyo siya kufumaneka ukuze sikumkele kwaye ngexesha lokuhlala kwakho.
UDanielle & Patrick yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cruet